नाम नमिलेको कि दुई पार्टी गाभिएको नमिलेको? कानुनको कुरो मिलाएर बुझ्नुपर्छ हेर्नुस् - Birgunj Sanjalनाम नमिलेको कि दुई पार्टी गाभिएको नमिलेको? कानुनको कुरो मिलाएर बुझ्नुपर्छ हेर्नुस् - Birgunj Sanjalनाम नमिलेको कि दुई पार्टी गाभिएको नमिलेको? कानुनको कुरो मिलाएर बुझ्नुपर्छ हेर्नुस् - Birgunj Sanjal
५ चैत्र २०७७, बिहीबार ०९:११
वीरगंज | सर्वोच्च अदालतले माधव नेपालको जन्मदिनमा दिएको सरप्राइज गिफ्टले माधव नेपालमात्र होइन, अरु पनि ट्वाँ परेका छन्। बमकुमार श्रेष्ठ र कुमार रेग्मीको इजलासले नामको विवादमा परेको मुद्दामा दुई पार्टीको एकीकरणलाई उल्टाइदिएर एकीकरणअघिको स्थितिमा फर्काइदिएको छ। प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापनाको मुद्दामा सारा मिडिया लागे, देशभर चर्चा भयो। तर यो नामको मुद्दालाई खासै कसैले महत्त्व दिएका थिएनन्। फ्याट्ट यही मुद्दामा यस्तो खालको देशको राजनीतिलाई नै असर पार्ने फैसला आइदियो।
बुझ्नु पर्ने सरल कुरा- दुई कम्युनिस्ट पार्टीबीच स्वार्थका कारण एकता भयो। व्यक्तिगत स्वार्थकै कारण त्यो एकतामा खलल आयो। दुई समूह मिलेर पनि बस्न नसक्ने, छुट्टिन पनि नसक्ने स्थिति आयो। डिभोर्स गर्ने विवाद चलिरहेका बेला तिमीहरुको बिहे नै अवैधानिक छ भन्ने फैसला आयो। अब डिभोर्स गर्ने भए पहिले वैधानिक रुपमा बिहे गर्नुपर्‍यो, अनि बल्ल डिभोर्स हुन्छ। अनि बच्चा चाहिँ के हुन्छ त भन्ने कुरा पनि आयो। बच्चा त पेटभित्र पसाउन मिल्दैन। बिहे वैधानिक रुपमा गर्नुपर्थ्यो। बिहे नै अवैधानिक भएपछि अवैधानिक रुपमा बाउआमा बन्नेले नै त्यसको जिम्मा लिनुपर्‍यो अब। न्यायाधीशले किन लिन्छ |